लिच्छवीकालीन कमलपोखरीमा 'सिमेन्ट र कङ्क्रिटको कमल' ! – Nepal Japan
लिच्छवीकालीन कमलपोखरीमा 'सिमेन्ट र कङ्क्रिटको कमल' !
नेपाल जापान ३ माघ १२:५२
काठमाडौं उपत्यकामा रहेका लिच्छविकालीन नौ पोखरीमध्येको एक पोखरी कमलपोखरीको पुनःनिर्माण चलिरहेको छ तर त्यो पुनःनिर्माण ऐतिहासिकता कायम गर्ने गरी नभै आधुनिक रुपमा हुन थालेपछि सम्पदाप्रेमी एवं स्थानीयवासीले बिरोध जनाएका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–१ मा रहेको ऐतिहासिक ‘पोखरी’ भर कमलको फूल फुल्ने भएकाले त्यसको नाम नै “कमलपोखरी” राखियो । तर सो पोखरीको पोखरी निर्माणका क्रममा प्राकृकि कमल हैन सिमेन्ट र कङ्क्रिटको कमल बनाउन लागिएको छ ।
सुरुमा रानीपोखरीमा पनि यस्तै गरिएको थियो । व्यापक बिरोध भएपछि रानीपोखरीले पुरानै स्वरुप पायो । अहिले कमलपोखरीलाई पनि विप पार्न खोजिएको भन्दै सम्पदा बचाउ अभियानले बिरोध जनाएको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख इञ्जिनीयर सरोज बस्नेतले निर्माण गर्नुअघि प्रस्तुत गरेको योजनाभन्दा उल्टो गरी कमलपोखरी बनाउन लागिएकामा अभियानले आज स्थलगतरूपमै बिरोध जनाएको छ । अभियानका युवाले सिमेन्ट र कङ्क्रिटको कमल जताततै फुलाउन सकिने भएकाले कमलपोखरी प्राकृतिकरूपमै विभिन्न प्रजातिका कमल फुलाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
एक वर्षअघिसम्म प्राकृतिकरूपमा रहेको कमलपोखरीको वरिपरि सिमेन्टको पेटी लगाएर घाट बनाइ पोखरीको आकारसमेत घटाइएको स्थानीयवासी रोशन श्रेष्ठको गुनासो छ । निर्माण गर्दा पुरातात्विक तरिकाले प्राचीन निर्माण सामग्री नै प्रयोग गरेर गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सम्पदा बचाउ अभियानका वैद्य बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा रहेका लिच्छवीकालीन नौ पोखरीमध्ये गहनापोखरी, बच्चापोखरी, नागपोखरी, हिटीपोखरी, हाँडीगाउँपोखरीरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
२०७४ सालको छठमा अव्यवस्थित कमलपोखरी देखेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आकर्षक बनाउन निर्देशन दिनुभए अनुसार काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा अघि बढाउन नौ करोड ४६ लाख ९९ हजार ५०२ को लागत स्टमेट तयार भयो । निर्माण कम्पनी जय धनञ्जय÷कँडेल जेभीले रु छ करोड ३६ लाख ५९ हजार ६०४ मा ठेक्का प्राप्त गरेको छ ।